Tim Cook ao amin'ny Apple Watch, Sina, ary bebe kokoa amin'ny Mad Money Show an'ny CNBC | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpampiantrano ny Mad vola de CNBC Jim Cramer, ny CEO an'ny Apple dia niresaka momba ny fanavaozana ho avy ao amin'ny iPhone sy Apple Watch, avy any Chine, avy amin'ny Android ka hatrany amin'ny iOS, ary maro hafa.
Voalohany, rehefa nanontaniana momba ny pny fihenan'ny fivarotana iPhone voalohany, Hoy i Tim Cook "Tsy afaka nifamaly bebe kokoa aho". Nilaza izy fa ny fidinan'ny varotra dia noho ny hamaroan'ny olona nividy ny iPhone 6 tamin'ny 2014, nahatonga ny fivarotany hitombo, ary ny fampitahana taorian'izay dia nidina, ary ara-dalàna izany. Angamba ny iray amin'ireo valiny mahaliana indrindra nolazainy dia ny "Fanavaozana lehibe" izay efa masaka, ary izany dia hampirisika anao hanavao ny iPhone, ary hividy iray vaovao.
Tim Cook avy eo manohy manao fanambarana misy tanjona izy:
Homena anao ny zavatra tsy iainana, izany foana no tanjon'i Apple. Manao zavatra manankarena ny fiainan'ny olona.
La zava-baovao eo amin'ny tsenan'ny smartphone dia nihena tao anatin'ny herintaona na roa taona. Na izany aza, raha misy orinasa mety manana fiasa vaovao vaovao te hanana iPhone vaovao, dia tsy mety ho Apple hafa.
Raha miresaka momba ny Apple Watch i Cook dia nilaza fa ny Apple Watch "Hihatsara hatrany io" ary ny orinasa dia mbola mianatra bebe kokoa momba azy io, sy izay azony omena. Manaraka, nampitaha ny fahombiazan'ny Apple Watch amin'ny iPod, izay tsy noheverina ho fahombiazana tamin'ny voalohany, fa izao dia hita fa fahombiazana.
About Wiki Shina, Hoy i Cook "Tsy afaka ny ho be fanantenana kokoa" momba ny firenena. Nilaza ny CEO fa "goavambe" ireo mpampiasa Android nivadika iPhone tany Sina tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2016, raha oharina tamin'ny vanim-potoana io tamin'ny taona 2015. Nanambara ihany koa izy fa Apple dia miasa akaiky amin'ireo manampahefana mifehy. iTunes, Movies e iBooks.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tim Cook ao amin'ny Apple Watch, Shina ary bebe kokoa amin'ny Mad Money Show an'ny CNBC